कम्प्युटर र इन्टरनेट | सबैका लागि उपयोगी जानकारी।
कोटी: कम्प्यूटर र इन्टरनेट
पावर बैंक - यो के हो? Hiper उर्जा बैंक
प्रकाशित 15.09.2019 08.01.2020
उपकरणहरूको साथ सक्रिय काम छिटो ब्याट्री नाली। धेरै व्यक्तिहरू सबैभन्दा inopportune पल मा मृत बैटरी सामना गरेको छ। दुर्भाग्यवस, तपाईंसँग सँधै आउटलेट वा चार्जरमा पहुँच हुँदैन। कसरी ...
हस्तलेखन मान्यता कस्ता कार्यक्रमहरूले यसले मद्दत गर्दछ?
कहिलेकाँही व्यक्तिगत कम्प्युटरको मालिकले एउटा बरु जटिल कार्यको साथ सामना गर्दछ - हस्तलिखित पाठलाई डिजिटल ढाँचामा अनुवाद गर्न। अवश्य पनि, तपाइँ यो कार्य म्यानुअली पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यद्यपि यो विधि सान्दर्भिक छ ...
Minecraft: तरवारहरू। कसरी Minecraft मा एक तरवार जादूगर
जब तपाईं Minecraft संसारमा पहिलो पटक देखा पर्नुहुन्छ, तपाईंसँग पूर्ण रूपमा केहि पनि छैन। तपाईंले आफ्नो प्रथम श्रोतहरू आफ्ना न bare्ग हातले निकाल्नुपर्नेछ र तिनीहरूको मद्दतबाट, तपाईंको पहिलो उपकरणहरू सिर्जना गर्नुहोस् जुन ...
हामी परिणामको लागि खेल्छौं, वा कसरी सिम्स-3 मा आवश्यकताहरू बन्द गर्न?
मान्छेहरू के चाहन्छन्? यस प्रश्नको उत्तर विभिन्न तरिकाले दिन सकिन्छ, तर कुनै उत्तर अझै अपूर्ण हुनेछ। यो किनभने हामी सबै फरक छौं? होईन, किनकि साझा लक्ष्यहरू धेरै वैश्विक छन् ... सबै कुरा ...
कसरी Aliexpress मा कुपन प्रयोग गर्ने: शपिंग निर्देशन
जो कोहीलाई Aliexpress जस्तो ट्रेडिंग प्लेटफर्मको बारेमा थाहा छ उसले खरीदहरूमा धेरै बचत गर्न सक्दछ। यस चिनियाँ साइटमा धेरै उत्पादनहरूका लागि मूल्यहरू बजार मूल्य भन्दा पहिले नै उल्लेखनीय रूपमा कम छन्। धेरैले लामो ...
"The Witcher 3": वाकथ्रु। "काउन्ट रोवेनको खजाना", कहानी खोज
विचर3एक RPG हो जसले सबैलाई अचम्मित गर्‍यो। अवश्य पनि, यस परियोजनाको पहिलो र दोस्रो भागहरू पहिले नै मास्टरपीसहरू थिए, तर तेस्रो अझ राम्रो भएको छ, जसले खेलाडीलाई कार्यको ठूलो स्वतन्त्रता दिँदै ...
मोबाइल फोनमा टेलिटाइप के हो?
केहि फोन प्रयोगकर्ताहरू, सेटिंग्समा डेलिभ गर्दा, एउटा बुझ्न नमिल्ने संक्षिप्त नाम TTY वा "टेलिटाइप मोड" भन्ने वाक्यांश भरिन्छन्। साथै, एक विशेषता आइकन स्मार्टफोनको स्थिति पट्टिमा उपस्थित हुन सक्छ। फोनमा TTY के हो? के को लागि…
कम्प्युटरमा गुगल क्रोम कसरी स्थापना गर्ने। शुरुआतीहरूको लागि निर्देशनहरू
तपाईं अचम्ममा पर्नुहोला, तर आज सबै प्रयोगकर्ताहरूलाई कम्प्युटरमा गुगल क्रोम कसरी स्थापना गर्ने भनेर थाहा छैन, र यो तथ्यको बावजुद यो ब्राउजर एक निर्विवाद नेता भएको छ ...
क्राइसिस एक्सएनयूएमएक्सको लागि स्टन्निंग ग्राफिक्स र प्रणाली आवश्यकताहरू
क्राइसिस। एक शूटरको नाम बाहेक यस शब्दमा धेरै कुरा छ। यो खेल सँधै "सर्वश्रेष्ठ ग्राफिक्स" कोटिमा मानद उपाधि प्राप्त गर्दछ। प्रत्येक नयाँ भाग अर्को पट्टी सेट गर्दछ कि सबैजना द्वारा निर्देशित ...
कुन राम्रो छ - PS3 वा Xbox? 360०? उत्तर खोज्दै
ठीक छ, हामीले अन्ततः केहि पैसा बचत गरेका छौं र हाम्रो पुरानो सपना पूरा गर्नका लागि तयार छौं र राम्रो गेम कन्सोल खरीदौं! हामी खेलहरूको रोमाञ्चक र रोमाञ्चकारी संसारमा डुब्न उत्सुक हुन्छौं र यसमा आत्मसमर्पण गर्दछौं ...
खेलमा इस्टर अण्डा - यो के हो? आउटलास्ट, Minecraft र GTA-5 खेलहरूको साथ ईस्टर अण्डाहरू
"ईस्टर अण्डा" खेलहरू, चलचित्रहरू, सफ्टवेयरमा "इस्टर अण्डाहरू" को लागि अपमानजनक नाम हो। यो एक प्रकारको गोप्य कुरा हो, जसको सामग्री सामान्य सामग्रीमा फिट हुँदैन, अव्यावहारिक, हास्यास्पद र अधिक प्रायः देखिन्छ ...
वारक्राफ्ट3का लागि थप अभियानहरू: फ्रिजन सिंहासन। वर्णन
वारक्राफ्ट for का लागि थप अभियानहरू: फ्रिजन सिंहासन मूल खेलको रिलिज भएको लगत्तै देखा पर्न थाल्यो। दश बर्ष पछि पनि तिनीहरू लोकप्रिय छन्। अभियान दुबै फ्यानहरू र खेल फर्महरू द्वारा सिर्जना गरिएका ...
कसरी "VKontakte" मा व्यक्ति प्रतिबन्ध लगाउने: "कालो सूची" बनाउन सिक्दै
आज हामी तपाईसँग VKontakte मा व्यक्तिलाई कसरी प्रतिबन्ध लगाउने बारेमा कुरा गर्नेछौं। साथै, हामी तपाईंसँग यो कार्यले हामीलाई के दिनेछ भनेर पत्ता लगाउन कोशिस गरौं। ध्यान दिएर कभर गर्नु अनावश्यक हुनेछैन ...
"युएसएसआर लोगोहरू" - खेलको नियमहरू
यदि तपाईं एन्ड्रोइड ओएस चलाउने मोबाइल उपकरणको मालिक हुनुहुन्छ भने, तब तपाईंले सम्भवत विभिन्न प्रकारका अनुप्रयोगहरू डाउनलोड गर्नुभएको छ, खेल सहित, यसमा एक पटक भन्दा बढी। आज हामीले तपाइँलाई निर्णय गर्यौं ...
प्रस्तुतिहरू सिर्जना गर्नका लागि कार्यक्रमको नाम के हो? प्रस्तुतिहरू सिर्जना गर्नका लागि कार्यक्रमहरूको विवरण
प्रकाशित 15.09.2019 26.11.2019
प्रस्तुतीकरणहरू बनाउने कार्यक्रम के हो भनेर प्रश्न गर्दा, धेरै व्यक्तिहरू निस्सन्देह माइक्रोसफ्टबाट प्रख्यात पावरपोइन्ट प्रोग्रामसँग स associate्लग्न हुन्छन्। यो बिभिन्नका लागि सामग्री सिर्जना गर्न डिजाइन गरिएको हो ...
पृष्ठ 1 पृष्ठ2... पृष्ठ 949 अर्को पाना
78 सेकेन्डमा उत्पन्न डाटाबेसमा 1,567 प्रश्नहरू।